Madaxweyne ku xigeenka Soomaliland oo kulan la qaatay Ganacsatada waa weyn ee Dalka Imaraadka Carabta – Walaal24 Newss
Madaxweyne ku xigeenka Soomaliland oo kulan la qaatay Ganacsatada waa weyn ee Dalka Imaraadka Carabta
September 28, 2019	Off	By walaal24
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) oo uu wehelinaayo wakiilka Somaliland u fadhiya Imaaraadka Carabta, Amb. Muniir Cabdillaahi Abusite welina ku sugan Isu-tagga Imaaraadka Carabta, ayaa Hotelka uu ka degan yahay Dubai ku soo booqday ganacsato waa weyn oo danaynaya inay maalgashadaan maamulka Somaliland.
Kulankan Madaxweyne ku xigeenku uu la qaatay ganacsatada ku soo booqatay hotelka uu degan yahay ayaa ujeedkiisu daaranaa sidii ay qayb uga noqon lahayaeen horumarka balaadhan ee ka socda maamulka Somaliland gaar ahaan dhinaca maalgelinta iyo horumairnta dhaqaalaha dhan walba la xidhiidha.
Waxaanay ganacsatadaasi u soo bandhigeen madaxweyne ku xigeenka maamulka Somaliland inay danaynayaan inay maalgelin ku sameeyaan dhinaca Beeraha, Dalxiiska, wershadaha iyo inay ka sameeyaan gudaha Soomaliland Hotello waa weyn oo casri ah, madaama ay Somaliland noqotay meel maanta caalamku isha ku hayo oo uu danaynayo una tartamayaan ganacsatada waa weyn iyo dawladdaha aduunku.
Madaxwayne ku xigeenka oo ganacsatada uga mahadnaqay sida ay u danaynayaan Soomaliland inay maalgelin ku sameeyaan ayaa ugu horayn ku marti-qaaday ganacsatadaasi inay Soomaliland yimaadaan oo ay soo indho indheeyaan horumarka iyo dedaalada maalgelineed ee ka jira dalka maamulka Somaliland, soona arkaan xeebaha dalka gaar ahaan Marsada Berbera oo iyadu wakhtigan hoggaanka u haysa horumarka ka socda Soomaliland, lehna garoon diyaaradeed oo hadda uun farta laga qaaday ahna ka Afrika ugu weyn wakhtigan, loona isticmaali karo nooc kasta oo diyaarado ah Afrika inteeda kalena looga faa’iidayn karo dhinaca ganacsiga kaarkooga.
Gebegabadii kulankaasi waxa uu ku soo dhamaaday isfahan iyo xidhiidh wanaagsan oo dhexmara ganacsatadaa caalamiga ah iyo maamulka Somaliland.
Ciidmada Xooga Dalka oo caawa dilay Horjogayaal iyo dagalamayaal ka tirsan Al-shabaab
Burcad Badeed Soomaaliyeed oo weerar ku qaaday Markab laga leeyahay Singabuur
Dhageyso: Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ayaa mooshin kalsooni kala noqosho ka gudbiyeen Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Soomaaliya